စနေ၊ တနငျ်ဂနှေနှစျရကျကို ၆ပေါငျလောကျလြော့ကစြမေဲ့ ၂ရကျစာအစားအသောကျ
Home Health & Beauty စနေ၊ တနငျ်ဂနှေ နှစျရကျကို ၆ပေါငျလောကျ လြော့ကစြမေဲ့ ၂ရကျစာ အစားအသောကျ
စနေ၊ တနငျ်ဂနှေ နှစျရကျကို ၆ပေါငျလောကျ လြော့ကစြမေဲ့ ၂ရကျစာ အစားအသောကျ
အစားအသောကျ ထိနျးခြုပျမှုမရှိလြှငျ လေ့ကငြျ့ခနျးလုပျနလေညျး အလကားပါပဲ သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျက အနညျးနဲ့ အမြား ဝဝလာဦးမှာပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ အစားအသောကျကို အမွဲ မထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့ သူတှအေတှကျ စနေ၊ တနငျ်ဂနှေ နေ့ ၂ရကျထဲမှာ အစားအသောကျကို ထိနျးခြုပျပေးရုံဖွငျ့ ၆ပေါငျ (၂.၇ ကီလို ဂရမျ) လြော့ခပြေးနိုငျမဲ့ အစားအသောကျမြိုးကို ရှေးခယြျဖောျပွပေးခငြျပါတယျ။
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ အစားကို စားခငြျတဲ့ အခြိနျမှာ နငျးကနျပွီး စှတျစားလိုကျ၊ မစားခငြျတဲ့အခါ ဘာမှကို မစားတာမြိုး လုပျနတောက ကနြျးမာရေးအတှကျလညျး ညီညှတျမှု မရှိသလို ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးခြုပျဖို့လညျး အရမျးကို ခကျခဲပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အစားအသောကျ စားတဲ့အခါ ပုံမှနျလေးစားသုံး သငျ့ပွီး ကိုယျနေ့စဥျစားမဲ့ အစားအသောကျကို အကနျ့အသတျလေးနဲ့ စားသုံးတာမြိုးကို အရငျဦးဆုံးပွုလုပျပေးရမှာဖွစျပါတယျ။ စားကောငျးရငျ ကောငျးသလို အမြားကွီး စားသုံးတာထကျ ဝိတျခနြတေဲ့ လူတစျယောကျဟာ အစားအသောကျအားလုံးကို အကနျ့အသတျထားရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အစာစားတဲ့အခါ ပနျကနျ ခပျသေးသေးကိုနဲ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျသလောကျ ခပျနညျးနညျး ပမာဏလောကျသာ ထညျ့ပွီး စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
စနနေေ့ တစျရကျစာအတှကျ အစားအသောကျ
နံနကျစာအတှကျ – စနနေေ့လို နေ့မြိုးမှာ မနကျစာ စားသုံးတဲ့အခါ ဒိနျခဲ ၂၀၀ ဂရမျကို အသားညှပျပေါငျမုနျ့မှာ သုပျလိုကျပွီး သငျ့တောျရုံအနအေထားလောကျ သကွားထညျ့ပါ။ ပွီးလြှငျအဆိုပါ ဒိနျခဲသုပျထားတဲ့ ပေါငျမုနျ့ကို လကျဖကျရညျ (သို့) ကောျဖီ တစျမြိုးမြိုးနဲ့ တှဲဖကျစားသုံးပေးပါ။
နေ့လညျစာအတှကျ – နေ့လညျစာအတှကျ ထောပတျသီး ၁လုံး၊ သခှားသီး ခပျလတျလတျအနအေထား ၁လုံး၊ စှပျပွုတျထဲမှာ ထညျ့လေ့ရှိတဲ့ ပေါငျမုနျ့ကွောျ အစအန အနညျးငယျ၊ သံပုရာရညျအနညျးငယျ၊ ဇီယာစေ့ အနညျးငယျ၊ ငရုတျကောငျး အနညျးငယျ၊ ခပျရှယျရှယျ အာလုံးတစျလုံးကိုပွုတျပွီး တစျဝကျကိုထညျ့ပါ။ ပွီးလြှငျအဆိုပါ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေို ရောနှောပွီး သုပျစားပေးလိုကျပါ။
ညစာ အတှကျ – ညစာအတှကျ ငါး ၁၀၀ ဂရမျကို ခကြျပွုတျပွီး စားသုံးပေးပါ။ အခြိုပှဲ အနနေဲ့ အဆီဓာတျ ထုတျထားပွီးသား ဒိနျခဲ ၂၀၀ ဂရမျနဲ့ တှဲဖကျစားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။
နံနကျစာအတှကျ – အစိမျးရောငျ လကျဖကျရညျ/ ရနှေေးကွမျး ၂ခှကျလောကျဖွငျ့ သကွားဓာတျမပါတဲ့ မုနျ့ တစျခုခုဖွငျ့ စားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။
နေ့လညျစာအတှကျ – နေ့လညျစာအတှကျ အားလူးပွုတျ ၁လုံး၊ လတျဆတျတဲ့ ဂေါျဖီထုပျ အနညျးငယျ၊ အဝါရောငျပွောငျဖူး အနညျးငယျ၊ သံလှနျဆီ ဇှနျးတစျဝကျနညျး အဆိုပါ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေို ရောနှောပွီး သုပျစားပေးပါ။
ညစာအတှကျ – ကွကျသား ၁၀၀ ဂရမျ၊ ကွကျဥပွုတျ ၁လုံး၊ ခရမျးခြဥျသီး အနညျးငယျ ကို အလြှငျသငျ့သလို ပေါငျးစပျစားသုံးနိုငျပွီး အခြိုပှဲအနနေဲ့ အဆီထုတျပွီးသား ဒိနျခဲ ၂၀၀ ဂရမျကို စာသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်ကို ၆ပေါင်လောက် လျော့ကျစေမဲ့ ၂ရက်စာ အစားအသောက်
အစားအသောက် ထိန်းချုပ်မှုမရှိလျှင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေလည်း အလကားပါပဲ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အနည်းနဲ့ အများ ဝဝလာဦးမှာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အစားအသောက်ကို အမြဲ မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့ ၂ရက်ထဲမှာ အစားအသောက်ကို ထိန်းချုပ်ပေးရုံဖြင့် ၆ပေါင် (၂.၇ ကီလို ဂရမ်) လျော့ချပေးနိုင်မဲ့ အစားအသောက်မျိုးကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ အစားကို စားချင်တဲ့ အချိန်မှာ နင်းကန်ပြီး စွတ်စားလိုက်၊ မစားချင်တဲ့အခါ ဘာမှကို မစားတာမျိုး လုပ်နေတာက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ညီညွတ်မှု မရှိသလို ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့လည်း အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစားအသောက် စားတဲ့အခါ ပုံမှန်လေးစားသုံး သင့်ပြီး ကိုယ်နေ့စဥ်စားမဲ့ အစားအသောက်ကို အကန့်အသတ်လေးနဲ့ စားသုံးတာမျိုးကို အရင်ဦးဆုံးပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စားကောင်းရင် ကောင်းသလို အများကြီး စားသုံးတာထက် ဝိတ်ချနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အစားအသောက်အားလုံးကို အကန့်အသတ်ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစာစားတဲ့အခါ ပန်ကန် ခပ်သေးသေးကိုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သလောက် ခပ်နည်းနည်း ပမာဏလောက်သာ ထည့်ပြီး စားသုံးသင့်ပါတယ်။
စနေနေ့ တစ်ရက်စာအတွက် အစားအသောက်
နံနက်စာအတွက် – စနေနေ့လို နေ့မျိုးမှာ မနက်စာ စားသုံးတဲ့အခါ ဒိန်ခဲ ၂၀၀ ဂရမ်ကို အသားညှပ်ပေါင်မုန့်မှာ သုပ်လိုက်ပြီး သင့်တော်ရုံအနေအထားလောက် သကြားထည့်ပါ။ ပြီးလျှင်အဆိုပါ ဒိန်ခဲသုပ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်ကို လက်ဖက်ရည် (သို့) ကော်ဖီ တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးပေးပါ။
နေ့လည်စာအတွက် – နေ့လည်စာအတွက် ထောပတ်သီး ၁လုံး၊ သခွားသီး ခပ်လတ်လတ်အနေအထား ၁လုံး၊ စွပ်ပြုတ်ထဲမှာ ထည့်လေ့ရှိတဲ့ ပေါင်မုန့်ကြော် အစအန အနည်းငယ်၊ သံပုရာရည်အနည်းငယ်၊ ဇီယာစေ့ အနည်းငယ်၊ ငရုတ်ကောင်း အနည်းငယ်၊ ခပ်ရွယ်ရွယ် အာလုံးတစ်လုံးကိုပြုတ်ပြီး တစ်ဝက်ကိုထည့်ပါ။ ပြီးလျှင်အဆိုပါ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ရောနှောပြီး သုပ်စားပေးလိုက်ပါ။
ညစာ အတွက် – ညစာအတွက် ငါး ၁၀၀ ဂရမ်ကို ချက်ပြုတ်ပြီး စားသုံးပေးပါ။ အချိုပွဲ အနေနဲ့ အဆီဓာတ် ထုတ်ထားပြီးသား ဒိန်ခဲ ၂၀၀ ဂရမ်နဲ့ တွဲဖက်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
နံနက်စာအတွက် – အစိမ်းရောင် လက်ဖက်ရည်/ ရေနွေးကြမ်း ၂ခွက်လောက်ဖြင့် သကြားဓာတ်မပါတဲ့ မုန့် တစ်ခုခုဖြင့် စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
နေ့လည်စာအတွက် – နေ့လည်စာအတွက် အားလူးပြုတ် ၁လုံး၊ လတ်ဆတ်တဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ် အနည်းငယ်၊ အဝါရောင်ပြောင်ဖူး အနည်းငယ်၊ သံလွန်ဆီ ဇွန်းတစ်ဝက်နည်း အဆိုပါ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ရောနှောပြီး သုပ်စားပေးပါ။
ညစာအတွက် – ကြက်သား ၁၀၀ ဂရမ်၊ ကြက်ဥပြုတ် ၁လုံး၊ ခရမ်းချဥ်သီး အနည်းငယ် ကို အလျှင်သင့်သလို ပေါင်းစပ်စားသုံးနိုင်ပြီး အချိုပွဲအနေနဲ့ အဆီထုတ်ပြီးသား ဒိန်ခဲ ၂၀၀ ဂရမ်ကို စာသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
Previous articleညဘက္ဓါတ္ပံုရုိက္တဲ့အခါ Night Mode ကိုဘယ္လိုအသံုးခ်မလဲ ?
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမလမှာ စားသုံးရမယ့် အစားအစာနှင့် ရှောင်ရှားရမယ့် အစားအစာများ
သင့်ရဲ့ကြောင်လေးက သင့်ကို ချစ်ကြောင်း ပြောပြနေတဲ့နည်းလမ်း (၁၀)ခု
Nandar Lwin - July 17, 2019
ကြောင်ချစ်သူလေးတွေ ရှိမှာပါနော်။ ကြောင်လေးတွေ၊ ခွေးလေးတွေက သခင်ကို အရမ်းချစ်တတ်ပြီး ပွတ်သီးပွတ်သပ်နေချင်ကြပါတယ်။ သူတို့က မိသားစုဝင်တွေလိုပါပဲ။ တခါတလေမှာ သူတို့ကို ကျောပွတ်ပေးတဲ့အခါ သင့်ကို ရုတ်တရက်ကိုက်လို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သူတို့ရူးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ သင့်ကို ချစ်လို့လုပ်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။...
လေယာဥ်တစ်စီးတည်း အတူတူစီးရင်း ဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုကြောင့် ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ နောက်ထပ်သန္ဓေသား ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလား?
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ မိသားစု ရာဇဝင်ရှိခဲ့သူ K-Pop အိုင်ဒေါ (၈)ယောက်
အိပ်ရာနိုးတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပြီး အကြောတွေကိုပြေစေဖို့အတွက် ထိရောက်တဲ့ အကြောဆန့်နည်း ၆ မျိုး